Inona no vaovao amin'ny Photoshop: ovao ny lanitra amin'ny tsindry tokana | Famoronana an-tserasera
Tonga nanambara i Adobe fa tsy ho ela isika dia afaka amin'ny seho famolavolana ankafizinay antsoina hoe Misafidiana ny photoshop ary soloina ny lanitry ny sary saika toy ny majia.
Izany no izy misaotra an'i Adobe Sensei, faharanitan-tsaina artifisialy an'i AdobeHahafahantsika manao firoboroboana toa ny fisafidianana lanitra iray manontolo ary afaka manamaizina azy, manamboatra azy amin'ny alina, mametraka volana feno na izay tonga ao an-tsainao; amin'ny Photoshop Camera ary izany amin'ny finday dia mamela ireo zavatra majika ireo.
Meredith Stotzner, Adobe Product Manager, dia ilay iray ihany izay naneho tamina horonantsary ny fahaizana misafidy sy misolo ny lanitra hanisy lanitra mahavariana misy masoandro mody na ilay mety indrindra amin'ny sehatra. Ho ohatra iray amin'izany, ny lahatsarin'i Adobe manokana mba tsy hahavery anao amin'ny antsipirihany ny zava-baovao amin'ny Photoshop:
Araka ny hitanao, ny lanitra maro karazana no tsy maintsy isafidianana ary ny fahitan'izy ireo an-tsehatra voafantina, manolotra fahafaha-manao zavatra betsaka izahay hanomezana an'ireny sary zavatra tsy misy dikany ireny, fa ho an'ny sary fampakaram-bady, fankalazana ary izay rehetra tianay hampiasaina ho an'ny tranonkalantsika dia fitaovana tena tsara io.
Efa nahita zavatra isika mitovy amin'ny PS Camera, Fampiharana finday Android sy iOS an'ny Adobe, ary ahafahantsika misafidy amin'ny sivana sasantsasany hanovana ny lanitra, na dia voafetra amin'ny sivana ihany aza. Eto manana fahalalahana misafidy isika isan-karazany lehibe amin'izy ireo mba hisafidianana alina, andro, filentehan'ny masoandro, na izay tiantsika.
ankehitriny mila miandry ny famoahana ny fanavaozana isika ary ndao isika hidina amin'ny raharaham-barotra hanao andrana amin'ireo lanitra izay ahafahantsika mamonjy ny sary vitsivitsy izay nalaintsika teo aloha ary, miaraka amin'ireo lanitra misokatra ireo, azontsika atao ny mamadika azy ireo ho majika hita maso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Vetivety ianao dia ho afaka hisolo ny lanitra misy sary ao amin'ny Photoshop amin'ny tsindry tokana